Snapseed: Iyo yakanakisa pikicha mhariri yeApple ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Snapseed: Yakanakisa pikicha mhariri yeApple; Yakabvarurwa imwe yeakanyanya kukwana mapikicha ekugadzirisa mapikicha aripo izvozvi. Yakarongedzwa nezvakakwira maficha, inove pakati pezvakanyanya kushandiswa munzvimbo yekutenda nekuda kwekunetsekana kwekushandisa, kunyanya kushandisa izvo zvekutanga maficha uye akasiyana presets uye mafirita.
Ehezve, kuenda kumagumo, vasina ruzivo vangazviwana ivo pachavo vavhiringidzika nekuda kweiyo hukuru hwemabasa aripo pakati pekugadzirisa maturusi. Hapana chakanyanya kuoma, chokwadi, asi mamwe acho anoda moyo murefu kuti ushandiswe zvizere.
Nekudaro zano rekukusiira iwe gwara rinokurumidza kushandisa nemimwe mienzaniso yakasungirirwa inogona kujekesa pfungwa dzako zvishoma uye, panguva imwe chete, ichikupa mukana wekuzviedza kuti mifananidzo yako ive inonakidza. Nezvikonzero zvezvimbo, isu hatizofunge zvese zvishandiso zviripo muSpapseed. Zvichida isu tichaona zvinonyanya kufadza; kubva pakuratidzwa nechena chiyero, kubva ku presets kusvika kukwesha kuburikidza chishandiso kubvisa zvisingadiwe zvinhu.
Snapseed; Maitiro akanakisa emupepeti edhita ye Android anoshanda
Usati waenderera kumberi kune anonyanya kufadza maturusi muSpapseed, zvakakodzera kutora tarisa pane izvo zvasetwa uye mafirita ipapo. Kune vakawanda, izvi zvinogona kukwana, kunyanya kune avo vanoda kuita shanduko dzinokurumidza kuti vape mufananidzo wacho kubata kwakanyanya.
Ingo tumisa mufananidzo uye pombi «Mhedzisiro», iro bhokisi riri pazasi rine akasiyana presets, kusanganisira "Portrait", "Pop", "Mangwana", "Fine Arts", nezvimwe. Kuti uipe yekuwedzera kubata, mamwe mafirita akaita seHDR, Grunge, Nhema uye Muchena, Noir, Retrolux, nezvimwewo, govera izvozvi kukurumidza
Muchidimbu, idzi shanduko dzinongoitika dzega dzinokwana vazhinji uye kufambira mberi, kunyanya kune avo vasingafariri kutambisa nguva yakawandisa, kana kungoziva vasingazive izvo zvishandiso zvakanyatsogadziriswa zvinokwanisa. Yakakundwa, iyo yatiri kuda kupa kwauri.
Basic zvishandiso uye kugadziridzwa mu Snapseed
Kutsvaga kusvetuka presets, Snapseed inopa nzira zhinji dzinokutendera iwe kuenda uye kugadzirisa iwo ma parameter. Kuti uite izvi, tinya pane "Zvishandiso" iro repakati bhokisi rinovanza pop-up menyu umo mafirita atakataura pamusoro uye akawanda anoitika.
Nhanho yekutanga ndeye kudzvanya pa "Calibrate", Sarudzo inopa mukana wekugadzirisa akasiyana paramende senge kupenya, kusiyanisa, kuzadza, mimvuri, nezvimwe. Kubva pano zvave kutokwanisika kusvika zvizere tsika mufananidzo, kuvandudza kuburitswa kwayo, uye mamwe ma parameter ayo maSmartphone anowanzo kutadza kuenzana nenzira kwayo
Muchena wakaringana kune maonero
Panguva ino, nebhesi rakadai tinogona kutogutsikana zvishoma. Asi izvi zveimwe nguva zvinogona kuve nyore kutanga poindi iyo inovhura kune dzimwe shanduko. Pakati pezvakanyanya musoro pane pasina mubvunzo sarudzo senge «Kupinza»Uye«Blur«, Asi pamusoro pese chishandiso che chinja chena chiyero, Imwe yeshanduko huru kana zvasvika pa gadzira mapikicha akatorwa nema Smartphones. Yakabvumidzwa inokutendera iwe kutora mukana wekugadzirisa otomatiki kana kutamba nemiparamende kuwana chiyero chakakodzera cheicho chaicho chiitiko, kana kuti chingave icho chatinonyanya kufarira.
Imwe sarudzo yekuda iyo inokutendera kuti ugadzikise pikicha yakatorwa yakamonyoroka, kana kushandura chifananidzo chakanyanya mwero chishandiso che "Pfungwa", gem iyo, pamwe neyekutanga zvishandiso zvekurima kana kutenderera mufananidzo, inopa yakawanda rusununguko uye dzakawanda dzakasarudzika nzira.
Bhurasho uye «chipukuta»
Kana iwe uchibhadhara izvi zvese, iwe unogona zvakare kuzvibata iwe nezvimwe zviviri zvakanaka izvo Yakakundwa chengetera kune anonyanya kuda: iyo «Bhurasho» uye chipukuta, zvinonyatso kuzivikanwa se «Kuporesa». Kunze kwekusahadzika, zvinonakidza kutaura mamwe mikana yekushandisa maturusi maviri ane chinangwa chakajairika: kugadzirisa pano neapo zvinhu zvakasiyana zvemufananidzo.
Unogona kuvawana vese vari mubhokisi rezvishandiso rakafanana, asi iyo «Brush»Inonyanya kushandiswa kuita shanduko dzakawandisa nekusarudza nzvimbo hombe nemunwe wako gadzirisa zvekuratidzira, kuzadza, Etc.
"Kuporesa", Ndeipi iyo eraserpachinzvimbo inokutendera kuti ugadzirise iyo mufananidzo unobvisa zvakanyanya kana izvo zvausingade. Iko kuvhiya kwakafanana ne «Brush": kwana sarudza nzvimbo pane chinhu chekubvisa uye Snapseed ichaibvisa "zvemashiripiti", kusanganisa zvese nezviri padyo. Kwedu, isu takaedza kubvisa nzvimbo yemumvuri kumusoro kwepamusoro, semuenzaniso.
Muchidimbu, iwe unofungei nezve Snapseed nemidziyo yayo? Tiudze zvako mune zvakataurwa pazasi, pamwe mushure mekuishandisa kufema hupenyu hutsva mune mamwe ekare, mapera mapikicha.
Maitiro ekutumira zvakanamatira muGmail yeApple